Fanampian’i Sina : 5 miliara dolara azon’i Mozambika (NewsMada) | AEMW
Fanampian’i Sina : 5 miliara dolara azon’i Mozambika (NewsMada)
Mitodika any Sina izao i Mozambika eo amin’ny fiaraha-miasa ara-toekarena. Fanapahan-kevitra noraisin-dry zareo Mozambikanina izany hatramin’ny FMI sy ny Banky iraisam-pirenena nanapaka ny famatsiam-bola ho azy ireo. Taorian’ny fandalovan’ny filohan’i Mozambika, Filipe Nyusi, tany Sina ny volana mey tamin‘ity taona ity, mbola nahazo famatsiam-bola vaovao indray ity firenena afrikanina ity.
Tamin’ny taon-dasa, taorian’ny fivoriana an-tampony teo amin’i Afrika sy Sina, nahazo 5 miliara dolara i Mozambika ho an’ireo tetikasa fanamboarana fotodrafitrasa lehibe any aminy, toy ny lalana, seranan-tsambo, tohodrano ho an’ny fambolena sy famatsiana angovo, sns. Vao mainka nanamafy ny fifandraisan’ny firenena roa tonta ny dian’ny filoha Filipe Nyusi tany Sina farany teo, nizahana indray ny lafiny indostria sy famokarana isan-karazany. Mahita ny fitondrana any Mozambika fa ny Sinoa ihany no afaka hanampy azy ireo hiala ao anaty krizy. Aely ny hevitra eto ho fankahalana Sinoa
Eto Madagasikara, aely ny hevitra ho fankahalana Sinoa tonga mampiasa vola eto an-toerana, toy ny ao Soamahamanina. Tsy ny Sinoa irery anefa ny vahiny eto, fa izy ireo ihany no maro mpanenjika. Ny tsy mpanara-dalàna, samy ahitana izany daholo, manomboka amintsika Malagasy tompon-tany ary matoa ny vahiny mahazo laka amin’ny tsy fanarahan-dalàna, misy Malagasy manohana azy ao ambadika.
Tsara ho fantatra fa mpampiasa vola be indrindra aty Afrika amin’izao fotoana izao i Sina, 200 miliara dolara ! Mbola mifampiraharaha betsaka any Sina ireo firenena tandrefana tompon’ny teny farany ao amin’ny FMI sy Banky iraisam-pirenena.
← Air Mauritius : manome lanja ny tsena eto an-toerana (NewsMada)
Vie nationale : le parti HVM se dit ouvert au dialogue (NewsMada) →